မှားယွင်းနေသည် 651, FIX ဖို့ဘယ်လို? - အမှားများ - 2019
မှားယွင်းနေသည် 651, fix ဖို့ဘယ်လို?
အမှားတွေကနေအဘယ်သူမျှမကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါသည်: အဘယ်သူမျှမသို့မဟုတ် (အတွေ့အကြုံကိုရှိုးကဲ့သို့) ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ...
သင်ကအတော်လေးတွေအများကြီးပေါ်လာနိုငျသောကွောငျ့အရာများ၏အကြောင်းပြချက်တခါတရံမှားယွင်းမှုတစ်ခု 651. PPPoE ကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ။
Windows ကို 7: အမှား 651 ၏ပုံမှန်မျိုး။
အမှား၏ 651 သဘောသဘာဝကွန်ပျူတာရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး signal ကိုလက်ခံရရှိ (သို့မဟုတ်နားလည်) မထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။ ဒါဟာလွှမ်းခြုံဧရိယာ၌ဖြစ်ခြင်း, မတစ်ဦးဆဲလ်ဖုန်းနဲ့တူရဲ့။ ဒါဟာအမှားအများဆုံးမကြာခဏက Windows setting များသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ (ဥပမာ, ကွန်ယက်ကဒ်, cable နဲ့အင်တာနက်ကွန်ယက် switch ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, စတာတွေ) ၏ကျရှုံးခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်၏, သာစစ်မှန်တဲ့နှင့်အမြန်ဆုံးဗားရှင်း - လူအတော်များများမှားယွင်းစွာဤပြဿနာအတွက် Windows ကိုပြန်လည်ကယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်အလွန်မကြာခဏဦးတည်သွားစေမ OS ကအမည်ပြောင်ပြန်လည်, အမှား (က "လက်သမား၏စည်းဝေးပွဲကို" ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးမေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး) နောက်တဖန်ပေါ်လာသည်။
အမှားအယွင်းများ 651 ခြေလှမ်းများဆုံး
ပေးမှာ 1. ပျက်ကွက်
ယေဘုယျအားဖြင့်စာရင်းဇယားအရသိရသည်ပြဿနာတွေနဲ့အမှားများကိုအမြိုးမြိုး၏အများဆုံးအသုံးပြုသူများ၏တာဝန်တစ်ခုချင်းဝက်အတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည် - ကြောင်း, တိုက်ရိုက်ကသူ့တိုက်ခန်း (အင်တာနက်ကေဘယ်လ်နှင့်အတူကွန်ပျူတာကွန်ယက်ကိုကဒ်နှင့်အတူပြဿနာများ, ကို Windows setting များနှင့်ဤမျှထွက်။ ) သို့။
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင် (~ 10%), ပုအမှားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ခန်းအတွက်ဘာမျှရည်မှန်းချက်ပေါ်ပေါက်ဘူးဆိုပါက (ဥပမာ, အရေးပေါ်ရပ်တန့်အလင်း, etc, ကွန်ပျူတာ drop ကြဘူး), နှင့်အမှား 651 သည်ထင်ရှား - ငါဖုန်းခေါ်ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစတင်အကြံပြုပါသည်။
သင့်ရဲ့ ISP ကသူတို့ရဲ့အခြမ်းပေါ်မှာရှိသမျှညာဘက်ကြောင်းအတည်ပြုလျှင်, ငါတို့သည်ထပ်မံသွားနိုင်ပါတယ် ...
စတင်အဘို့ငါ Device Manager ကိုသွားပါနှင့်အရာခပ်သိမ်းယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ OK ကိုလျှင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံပဋိပက္ခယာဉ်မောင်း, ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ adware စသည်တို့ကိုမအောင်မြင်မှုများ, အမြိုးမြိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ - တူညီတဲ့အမှားပေးခြင်းနေစဉ်ကွန်ပျူတာရိုးရိုး, ကွန်ယက်ကဒ် detect မပြုစေခြင်းငှါဒါကြောင့် ...
device ကိုမန်နေဂျာကိုစတင် - OS ကို control panel ထဲကသို့သွားနှင့်ရှာဖွေရေးကိုသုံးပါ (အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။ ) ။
Device Manager မှာ "ကွန်ယက် Adapter က" ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှပစ္စည်းကိရိယာများ (အထူးသဖြင့်အနီ) အဝါရောင်အာမေဍိတ်အိုင်ကွန်ဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ထို့ပြင်ငါ (device ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကနေသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်အသုံးပြုပုံကွန်ယက်ကို Adapter ကများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်ဖို့ update ကိုယာဉ်မောင်းအကြံပြု:
ဒါဟာတဦးတည်းကိုပိုပြီးအသေးစိတ်မှတ်သားရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါကွန်ယက်ကိုကဒ်ရိုးရှင်းစွာကျရှုံးလိမ့်မည်။ အခွင့်အလမ်းကစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာမထိပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (လျှပ်စီး) ၏ရုတ်တရက်ခုန်ရှိလျှင်ဤဥပမာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စကားမစပ်, Device Manager ထဲတွင် device ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုပါကသင်သည်လည်းတွေ့မြင်နိုင်သည်, သူသည် OK ကိုခဲ့တာရှိမရှိ။ ကွန်ယက်ကဒ်အရာရာအိုကေသည်ဆိုပါက - သင်ကလာမယ့် "တရားခံ" အမှားအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ...
အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန် 3. ပျက်ကွက်
ဤအကြောင်းအရာသည်အလိုအလျှောက်အင်တာနက်ကိုယ်တိုင်ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ router ကို, မရှိကြပါဘူးသောသူတို့အဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင် setting များကိုပြီးသားကို set up နေကြတယ်နှင့် PPoE ကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ် (Windows ကို crash ဖြစ်သောအခါ, ဥပမာတချို့ပရိုဂရမ်၏မလျော်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများနှင့်ဤမျှထွက်။ သူ Work) ခေါက်နိုင်ပါတယ်။ , ဟောင်းကွန်နက်ရှင်ကိုဖယ်ရှားအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစား: ဒီအခြေအနေကိုကုစားဖို့, သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, "Control Panel ထဲက ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက် Control Center ကိုကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်း Center က" ကိုသွားပါ။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဟောင်းများကိုချိတ်ဆက်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်နှင့် (data တွေကိုသင့်ရဲ့ ISP ကစာချုပ်ထဲကနေယူ) ကွန်ယက်မှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက် username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖန်တီးပါ။
Router ကိုအတူ 4. ပြဿနာများ ...
သငျသညျရှိသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (တစ်ဦးချင်းစီတိုက်ခန်းအင်တာနက် access ကိုလိုအပျကွောငျးမျိုးစုံ devices များရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့, အခုအချိန်မှာအလွန်လူကြိုက်များ) တစ်ဦးသည် router မှတဆင့်သည်ဆိုပါက - ကပြဿနာ (တူညီသည့် modem နှင့်သက်ဆိုင်) သူတို့နဲ့အတူကြောင်းအတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သောင်တင် Router က
သူတို့တက်ကာမိုးသည်းထန်စွာဝန်နှင့်အတူအပြေးရှည်လျားများမှာအထူးသဖြင့်လျှင်, အထွက်ဆွဲထားဖို့အခြိနျမှနျမှ routers ။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ - ရိုးရှင်းစွာလျှပ်စစ်မီး router မှ 10-20 စက္ကန့်အဆက်ပြတ်, ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက် reboot နှင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျရှုံးခြင်း setting ကို
Router ကိုအပေါ်ကိုဆက်တင်အချို့ကိစ္စများတွင်, (ယင်းကဲ့သို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက်ချွန်ထက်ခုန်ကဲ့သို့) လမ်းလွဲသွားပါလိမ့်မည်။ သင် router ကို setting များကို reset နှင့်နောက်တဖန်သူတို့ကိုမသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်သေချာပါစေရန်။ ထို့နောက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုစမ်းသပ်ရန်။
routers နှင့် Wi-Fi ကွန်ရက်တည်ထောင်ဘို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တချို့နေရာလေးကိုရည်ညွှန်း -
အလုပ်၏အလေ့အကျင့်ကနေငါကျိုး router များသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှားပါးဖြစ်ကြောင်းပြောနိုင်ပါသည်။ စသည်တို့ကို, မတော်တဆထိခိုက်မှု device ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးတစ်ဦးခွေး nibbled: ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ်အချက်များတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ်
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလမ်းဖြင့်, သင်သည်အင်တာနက်စစ်ဆင်ရေးစစ်ဆေးနိုင်သည်ကို router ကို turn off နှင့်တစ်ဦးလက်ပ်တော့သို့မဟုတ် PC မှညွှန်ကြားဖို့ ISP ကမှအ cable ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ယင်းနောက်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖန်တီး (Windows မှာ Control Panel ထဲက Center ကကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်းရေးစင်တာ။ ဤဆောင်းပါး၏ပစ္စည်းကို3ကိုကြည့်ပါ) အင်တာနက်ကိုအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန်။ ထိုသို့မှန်လျှင် - ထိုပြဿနာကို Router ထဲတွင်ဖြစ်ပါသည် - လျှင်ဘဲ, အမှားအခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ...
တခြားအရာအားလုံးထက်ပျက်ကွက်လျှင်, အမှား 651 fix ဖို့ဘယ်လို 5.
cable ကိုပံ့ပိုးပေးစစ်ဆေးပါ။ ကျိုးသင့်ရဲ့အမှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်မည်မဟုတ်ပါ: ဥပမာကေဘယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပျက်စီးစေနိုင်သည်ကြောင်, ခွေး။ အလားတူ cable ကိုသင်အင်တာနက်သို့မဟုတ် cable ကို TV ကအိမ်နီးချင်းများ post တဲ့အခါမှာဥပမာ, တံခါးနားမှာပျက်စီးစေနိုင်သည် ...
2) PC ကို Reboot
တစ်ခါတစ်ရံရိုးရှင်းစွာအမှား 651 ဖယ်ရှားပစ်ရကူညီပေးသည်ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက် restart ချလိုက်ပါ။
3) system registry က settings ကိုနှင့်အတူပြဿနာများ
သငျသညျဘေးထွက်စကေးနှင့်ဖြုတ်ပစ်ထောက်ခံမှုလက်ခံ disable ရမယ်
(Windows 8, စာနယ်ဇင်းဝင်း + R ကိုပေါ်, ထို့နောက် Enter regedit လို့များနှင့်စာနယ်ဇင်းရိုက်ထည့်; Windows7ကို, ဒီ command ကို Start Menu ထဲမှာထဲသို့ဝင်နိုင်ပြီးမျဉ်းအတိုင်းလိုက်နာ) ကို registry ကိုသွားပြီးအခက် HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services မှ Tcpip Parameters ကိုရှာဖွေနေပါသည်
EnableRSS ကိုခေါ် DWORD parameter သည် Create ကသုညတန်ဖိုး (0) သတ်မှတ်ထားသည်။
ဌာနခွဲ HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services မှ Tcpip Parameters ကိုရှာပါ
တစ်ဦး parameter သည် (ကတည်ရှိလျှင်) DisableTaskOffload Create နဲ့ 1 မှ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုထားကြ၏။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဘို့သင့်ကို PC ထွက်ပေါက်နှင့် restart ချလိုက်ပါ။
4) Recovery ကို (ပယ်ဖျက်ရန်) Windows ကို
သင်တစ်ဦး Restore point တစ်ခုရှိပါက - စနစ်ပြန်လှိမ့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အချို့ကိစ္စများတွင် - နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်ဒီ option ကို ...
Recovery ကို Control Panel ထဲက အားလုံး Control Panel ထဲကပစ္စည်းများ: အ OS ကို restore လုပ်ဖို့, အောက်ပါသော့ချက်ကိုသွား
5) antivirus ကိုနဲ့ firewall
အချို့ကိစ္စများတွင် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု၏ထိုအချိန်ကကို disable antivirus ကိုအကြံပြုပါသည်။
သည်လူအပေါင်းတို့ကိုကွန်ယက်အပေါငျးတို့သအောင်မြင်သောစစ်ဆင်ရေးပါပဲ။ ငါဆောင်းပါးတစ်ခုဖြည့်စွက်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ် ...
https://termotools.com my.termotools.com © အမှားများ 2019